Ūfie - Howling Pixel
Ūfie bu àgwà nke owula na cha ìfè nkeowula nke na bányé madu na ányá kà onyé áhù hu ya ka ö ná chá ka àgwà ǹká.
Akàlà nke àgwà Ūfie
Malcolm X (ha mụ rụya nalcolm Little; 19 Ọnwaìse 1925 — 21 Ọnwaàbụọ 1965) ha màkwà ya ka El-Hajj Malik El-Shabazz (na asụsụ Arabic: الحاجّ مالك الشباز‎) bu mgbe mbu onye Afrika nke Amerika onye Áláküba nke onye íshí, onyé nkuwa okwu, na onye ndozi íwú madu. Na anya ndi né so ya, o bu onye íké na odogwu maka ihe ómá o mẹrẹ ndi Afrika nke Amerika maka íwú ndu ha. O bukwa maka o cẹdolu ndi Afrika ime okwu ó kwụru maka ndi ochá ne megbú ndi ojié. Ndi o na á masiri ha si o bu onye na kwudà ndi óchá, ha sikwa o né weli élú ndi ojie na íshí ndi ocha, o na kwudà ndi Jew na o bu onyé ogụ. Madu si o bu onye Afrika nke Amerika nke nwéré ihe ukwu o mẹrẹ na uwá.
Há mùrù Malcolm X nà Omaha, Nebraska. Ihe méré na mgbe ȯ ne tó, dí kà nkwúzí ńnà zìrì yá màkà ngàngà ojie na Í rü na áká onwé gị, na ihe ȯ hùrù na ányá ya màkà ihe ndi ojié na ndi óchá, dịrị ihe mpká na ńdụ Malcolm X mgbe ó tòrò. Mgbe ó rùrù afọ̀ iri na àtó, ńnà yá nwürü na mmá yá gàrà ụló ogwụ nke ndí íshí kófụrụ. Na mgbé ȯ mèchàrà gé úlò ndí ọ̀zọ né lékótá ya, Malcolm X banyèrè orü nke ntúfùtá ntúfùtá na orü mmébị íwú ndi ọ̀zọ na Boston na New York City kwá. Na afọ̀ 1946, úlọ ikpe dịrị Malcolm X Í jí afọ̀ asatọ mà ọ bu irí Í nọr na mkpóró.
Mgbe ȯ nọr na mkpóró, Malcolm X bànyèrè Í bu ónyé ọtú Nation of Islam. Mgbe ȯ fúfùtàrà na nke ȯ méchághị Í nȯr chá mkpóró ya na afọ̀ 1952 (parole), ȯ bàtàrà Í bu onyé íshí na onye ǹdù né kwú na nke há. Na mgbé afọ̀ dí kà ịrí na abụọ, ȯ bụ íhü ọtú Nation of Islam. Ihe nsògbu chọrí da ótù mgbe na etítì Malcolm X na Elijah Muhammad, onye íshí nke kárírí ndi Nation of Islam; ȯ bu ihe á mèrè kà Malcolm X dáfùrù na ọtú áhù na Önwa àtó nke afọ̀ 1964.
Mgbé ȯ fwụrụ ọtú Nation of Islam, Malcolm X banyèrè Í bu ónyé Áláküba Sunni nà ȯ gàrà íjè-éféfé nke Mecca; mgbe ȯ mèchàrà ȯ gọrọ mbànyíkàrịrị àgùgò. O gàrìrì nà ímé Afrika na Odida Etítì à gárírí. O kèrè Muslim Mosque, Inc., ọtú éféfé, na ọtù nke éféfé ádíghị, na nke Africa-Nílé, Afro-American Unity. Mgbe o rúgị áfọr ótù ó mèchàrà Í háfù ńdí Nation of Islam, mádu àtó shí ngáhü gbùrù Malcolm X mgbe ȯ ne nyé okwu na New York.
Odòdo bu àgwà nke nor na etítì ūfie na òtanjele.
Àgwà bu ihe ọfù madu na tà nke kèjiri na ūfie, ochándụ, òtanjele na ndi ozor. Àgwà shi nkèji ìfè nke ya na ányá madu gbakọbàrà, maka ihe nkwesị nor na ányá. Í ké ọdù nke àgwà, Í nweríkí nye àgwà aha nke onuogụgụ Í me ka ö nwé ílụáká.